साहित्य Archives - सबैको समाचार
ए रहर पटकपटक गला किन थिच्छस ए सपना हरेक रात किन ऐठन बनाउछस त रहरलाई पुरा गर्न म मा औकात छैन त सपना पुरा गर्न म मा हैसियत छैन यो त प्रतिस्पर्धा र पैसा को संसार हो रित्तिएको गोजिले औकात जत्ती खोज्छ रहरले त्यति पटक गला थिचिरहेछ केहि आउला केहीमा सक्षम होला तर कागजका नोटले […]
चैत २८, काभ्रे । साहित्यकार तथा भाषासेवी हरिमञ्जु श्रीलाई एक कार्यक्रमका बिच ६० वर्ष उमेर पुगेको अवसरमा मोति महोत्सव गरी शनिबार मनाईएको छ । लिला–मध्यमार्ग अक्षयकोष शब्दयात्रा प्रकाशन, गुरुकुल पाठशाला, नैमिषारण्य, मानव अधिकार संगठन काभ्रे लगायत पाँच दर्जनभन्दा बढि संघ संस्थाहरुले अभिवन्दनापत्र प्रदान गरी सम्मान गरेका थिए । मोति महोत्सव मूल समारोह समितिको आयोजनामा भएको […]
काठमाडौं, १९पुस । साहित्यकार गोबिन्द कडेंल आँसुलाई बेस्ट लिरिसिष्ट अवार्ड २०२० द्धारा सम्मानित गरिएको छ । उहाँलाई जुरी छनौटद्धारा बेस्ट लिरिसिष्ट अवार्ड प्रदान गरिएको हो । उहाँले हालै बजारमा ल्याउनुभएको आधालाश जलिसक्यो बोलको गीतद्धारा उक्त अवार्ड पाउनुभएको हो । सो अवार्डलाई अभिनेता तथा निर्देशक विरेन्द्र हमालले सम्मान तथा अवार्ड प्रदान गर्नुभएको थियो । यसअघि पनि […]
अब बग्दैनन् आँसु,आँखामै जम्छन्,ताल बनेर मुटु ढुङ्गा भएको छ,म निस्केको छु,पर्खाल बनेर परिवार छैन,बाआमाको ठेगान नभएकाहरुकै जिन्दगी उभिन्छ, समाजका निम्ति सवाल बनेर जति सहनेछौ,त्यति हेपिनेछौ साथी,याद राख आइलाग्ने माथी जाइलाग्नुपर्छ अरिङ्गाल बनेर माइतीबाट डोली उठ्दा यो कुरा सोचिनन् उनलेे पोते पासो हुनेछ, सिन्दुर आउनेछ काल बनेर आगो ताप्नुस्, क्रान्तिको उज्यालो छर्नुस,महोदय गरिब, निमुखाहरु बलिरहनेछन्, पराल […]
कतै नभेटिएकाे मजा एक्लाेपनमा आउँछ । साेच्दै नसाेचेकाे कुरा पनि मनमा आउँछ ।। के छ र सर्लक्कै आकाश पाताल जाेडिदेऊ । जाेश जाँगर भएभरकाे जम्मै याैवनमा आउँछ ।। सायद यही भएर साेचेका कुरा पूरा हुँदैन। मान्छे जन्मिदै अर्काकाे खटनमा आउँछ ।। मन परेकाे मान्छे आँखामा राख्दा बिझाउँदैन । फेरि उही मान्छे धड्किन धड्कनमा आउँछ ।। […]
काठमाडौँ / महोत्तरी कला साहित्य संगीत प्रतिष्ठान नेपाल गठन भएको छ । आज राजधानीमा आयोजित एक बिसेष समारोहमा पत्रकार सम्मेलन गरि साईमोन थापाको अधक्ष्यतामा उक्त समिति गठन भएको हो । प्रमुख अतिथि नेकपाका केन्द्रिय सदश्य टेक बहादुर बलम्पाकी रहेको उक्त भेलामा बिसेष अतिथिहरुमा गायक पूर्ण परियार, गायिका राधिका हमाल, संचारकर्मी सुर्य चन्द, संचारकर्मी भरत बम्जन, […]
भक्तपुर, १० असार । नेपाली कविताको श्रीवृद्धिका लागि बेग्लै कार्यक्रम सँझ्या साहित्यमा फरक पुस्ताकातीनकविले आफ्ना कविता प्रस्तत गरे ।भक्तपुरलाई कला र कविताका लागि पर्यटन क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यका लागि कविताको अतिरिक्त कार्यक्रम गरिरहेको जानकारी गराउँदै आशुतोषले भने —भोलि अनुसन्धानकर्ता वास्तविक कविता खोज्न भक्तपुर आउने छन् । पचासको दशकको पूर्वाद्धमा कविता लेखेर चर्चा बटुलेका कवि […]
गजल-हातमा उठ्या ठेला उस्तै छन। बाटो खन्दा हातमा उठ्या ठेला उस्तै छन। त्यही बाटो भत्काउने ती भेला उस्तै छन्। जति नयाँ भने पनि पुरानै हुन चाला, किनभने पाठशालाका चेला उस्तै छन् । देश विकाश गर्छु भन्दै विनाश पो गर्छन, काममा ढिलासुस्ती अनि अबेला उस्तै छन् । सिंहदरवार धुम्टो ओड्छ सर्माएर आफैँ, त्यहाँ भित्र हुने झमेला […]
पछिल्लो समय प्रवासबाट कला साहित्यका क्षेत्रमा आबद्ध हुने प्रतिभाको संख्या बढ्दै गएको छ।धन कामाउने ठुलो सपबना बोकेर श्रम बेच्न खाडि पुगेका युवाहरुमा जति सुकै दुख कष्ठ आई परेपनि नेपाली लोक सस्कृति प्रतिको माया स्नेह ,मोह अलिकति पनि कम भएको छैन । यसको ज्वलन्त उदारहण हुन् । खाडिबाट गित संगितका क्षेत्रमा उदाउने नयाँ कलाकार श्रम गर्दा […]
साहित्यकार रमेश विकलको नाममा स्थापना भएको प्रतिष्ठानको भवन शिलान्यास आज एक समारोहबीच गरिएको छ । विकलले जीवित हुँदै विसं २०६३ मा रमेश विकल साहित्य प्रतिष्ठानको स्थापना गरी आफू जन्मिएको घर प्रतिष्ठानका नाममा दान गर्नुभएको थियो । उहाँले पुस्तकको रोयल्टीबापत आउने रकमसमेत प्रतिष्ठानका नाममा जम्मा हुने गरी तयार पार्नुभएको इच्छापत्रमा छोराछोरीले सहमति जनाउनुभएको थियो । पाँच […]
तराईका १९ जिल्लाका थुना केन्द्रमा १४ प्रतिशत व्यक्तिले यातना पाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएकोे छ । ‘तराई मानवअधिकार संरक्षक सञ्जाल’ नामक संस्थाले तयार पारेको ‘तराईमा यातना–२०१६’ नामक प्रतिवेदनमा विभिन्न थुना केन्द्रमा छ सय ७४ थुनुवासँग अन्तर्वार्ता गर्दा एक सय ६७ (२४.७४ प्रतिशत) ले यातना पाएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा १३.७८ प्रतिशत थुनुवालाई २४ घन्टाभित्र अदालतमा उपस्थित […]
हरिहर कार्की (काजी ) टुप्पोमा बसेर हाँगो काट्ने हरुको जमात छ यहाँ ! राम्रो , उन्नति र प्रगति गर्दा सराप्ने जमात छ यहाँ ! काट्दै जाऊ हाँगो तिमि म गिट्टी कुत्ति रहन्छु बाढ्दै जाऊ पुरा नहुने सपना म उकाली चढी रहन्छु ! छैन मलाई बाधय्ता नुनको सोझो गर्नलाई छ त् केवल मेरो घरको सुरक्षा भर्नलाई […]